Uqinisa umkhankaso KwaZulu-Natal uMaSisulu - Bayede News
Uqinisa umkhankaso KwaZulu-Natal uMaSisulu
Sithinteke ngezindlela ezihlukene ngengculazi
NGESIKHATHI lapho i-ANCWL KwaZulu-Natal ingeneme ngemikhankaso kaNgqongqoshe uLindiwe Sisulu yokuba uMengameli olandelayo kaKhongolose yena ubukeka engakugqizi qakala lokho. Lo mholi uyaqhubeka nokwehla enyuka ezifundazweni ezama ukugqugquzela amalungu kaKhongolose ukuba amqoke engqungqutheleni yokukhetha ozohola le nhlangano ngoZibandlela. Muva nje uSisulu ubonge amagatsha kaKhongolose KwaZulu-Natal ngokukhombisa ukumeseka emkhankasweni wakhe.
Ukwenza lokhu nje kuthe ezinyangeni ezimbili ezedlule uphiko lwabesifazane lukaKhongolose KwaZulu-Natal lwadalula ukuthi lufuna ahoxe kulo mkhankaso ngoba uphazamisa uDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma. UNkk uNomagugu uMaSimelane Zulu oyiphini likaSihlalo we-ANCWL KwaZulu-Natal, uke watshela abezindaba ukuthi abayazi le nto eyenziwa uSisulu ngoba kubukeka sengathi sebezama ukuphendula ipolitiki ye-ANC ifane neyase-USA. “Siyafisa ukumkhuza uComrade uSisulu ukuba ayeke ukungenela lesi sikhundla ngoba uphazamisa imikhankaso kaDkt uMaDlamini Zuma, okunguye njengabantu besifazane esivumelene ngegama lakhe ukuba abe nguMengameli olandelayo. Asisho ukuthi akafanelwe ukuhola kodwa isikhathi sakhe asikafiki ngakho okuyokwenzeka ukuba okungcono simbhekelele ebuholini bukaDkt uMaDlamini Zuma okungenani angene esigungwini esiphezulu,” kusho uNkk uMaSimelane Zulu.
Nokho ithimba labaphethe umkhankaso kaNks uLindiwe Sisulu selisishayele ihlombe isinqumo samagatsha kaKhongolose, sokuphakamisa igama lakhe ekutheni akhethwe engqungqutheleni engenyanga ezayo ukuba abenguMengameli olandelayo we-ANC. Leli thimba elibizwa nge#Sisulu17 It’s a Must, likhiphe isitatimende kuleli sonto lincoma amalungu amagatsha aphakamise igama likaNks uSisulu njengofanele ukungena ezicathulweni zikaMengameli uJacob Zuma, engqungqutheleni yama-54, ezoba seGallagher Estate, eGauteng kusuka mhla zili-16 kuya mhla zingama-20 kuZibandlela.
Amagatsha aphakamise igama likaNks uSisulu kubalwa angaphansi kwesiFunda eBaqulusini, KwaZulu-Natal; asesiFundeni iBoland, eWestern Cape nezinhlaka ezehlukene e-Eastern Cape. UMkhulumeli we-#Sisulu17 It’s a Must, uMnu uMogomotsi Mogodiri uthe lokhu kubanika ithemba ngokuqina komkhankaso kaNks uSisulu wokuba nguMengameli olandelayo we-ANC. “Okwenziwe yila magatsha kusifakele umfutho oyisimanga wokuqinisa umkhankaso kaNks uSisulu wokuba nguMengameli we-ANC olandelayo. Ngaphandle nje kwalokho, lesi senzo samagatsha aphakamise igama lakhe sikhombisa ngokusobala ukuthi ziningi izinhlaka ze-ANC ezinethemba kuye lokuba ahole uKhongolose,” kusho uMogodiri.
Intsha yamaKhomanisi iyawusola umgqakazo
KwaZulu-Natal wenza konke ukuqinisa umkhankaso wakhe, waze wahambela ibandla lamaNazaretha, eMnambithi, wanikela ngezinkomo ezingama-40. Muva nje usanda kuhambela eMpangeni eyokhuluma nosomabhizinisi. Kulolu hambo kwakuhlelwe nokuba ahlangane neSILO kodwa lowo mhlangano wagcina ngokubhuntsha ngenxa yabahleli bawo abangatholakalanga ngomzuzu wokugcina. INdlunkulu yathi yayingenalwazi lomhlangano kaNks Sisulu neSILO. “Uyaqhubeka nokwehla enyuka kuzona zonke izingxenye zezwe ngenxa yokuzama ukuqinisa umkhankaso wakhe. Okuseqhulwini kuye ukuba uma ethatha izintambo abuyise ubumbano kuKhongolose, alwe nenkohlakalo,” kusho uMogodiri.
Bayede News Nov 28, 2017